Raad Raac News Online – (Dhageyso) Qodobo hordhac ah oo ka soo baxay shir u socda Isimada Puntland iyo Odayaasha dhaqanka Beesha Tanade.
(Dhageyso) Qodobo hordhac ah oo ka soo baxay shir u socda Isimada Puntland iyo Odayaasha dhaqanka Beesha Tanade.
Moos Bukeeni July 9, 2017 Comments Off on (Dhageyso) Qodobo hordhac ah oo ka soo baxay shir u socda Isimada Puntland iyo Odayaasha dhaqanka Beesha Tanade.
Magaaladda Garowe ee Xarunta Dowladda Puntland waxaa weli ka soconaya shir ay leeyihiin isimada dhaqanka Puntland iyo Odayaasha dhaqanka Waxgaradka iyo Salaadiinta Beesha Tanade.
Shirkan oo ay gogoshiisa taalo Magaalada Garowe waxaa soo qaban qaabiyay Odayasha sallaadiinta waxgaradka iyo duqeyda beesha Tanade iyadoo Isimada ay u gudbinayaan Cabashada ay beesha ka qabto Puntland.
Beesha Tanade oo ka Mid ah beelihi wax ku lahaa aas aaska Puntland ayaa Isimada dhaqanka Puntland u gudbiyay in la hareer maray habkii saami qeybsiga beelaha Puntland taasina ay keentay Cabasha beesha.
Mudo ku dhow shan cisho oo shirkan uu ka soconayo magaaladda Garowe ayaa go’amadii ugu dambeeyay ee shirkan ka soo baxay waxaa laysla gartay in dowladda la horgeeyo cabashada beesha Tanade.
Sidoo kale shirkan Cabashooyinka ay qabaan Odayaasha dhaqanka Beesha Tanade ayaa waxaa dhawaan la horgeyn doonaa Madaxweynaha Puntland Ku xigeenkiisa iyo xubnaha Golaha Xukuumadda kuwaasi oo turxaan bixin dheer ku sameyn doona sida laga yeeli doono cabashada beeshan.
Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah Salaadiinta dhaqanka ugu waa weyn Puntland ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu ka war bixiyay Natjiida qodobada hordhaca ah ee ka soo baxay shirkan.
Suldaanka aya waxaa uu sheegay in Odayaasha Beesha Tanade iyo Isimada isu af garteen in xukuumada dhawaan lala hortagi doono qaabka loo xalin karo cabashda Odayaasha dhaqanka beesha Tanade.
Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo ah Suldaanka guud ee Beesha Tanade aya dhankiisa sheegay in ay soo dhaweynayaan Natiijada qodobada hordhaca ah ee ay isla gaareen Isimada dhaqanka Puntland,
Sidoo kale Suldaan Maxamed Jaamac Shire wuxuu sheegay in ay sugi doonaan jawaabta uu Madaxweynaha ku xigeenkiisa Iyo xubnaha golaha Xukuumadda ka yeeli doonaan sida ay u wajihi doonaan xal ka gaarista cabashada beesha Tanade.
Kulankan Madaxweynaha eel ala horgeyn doono cabashada beesha Tanade ayaa ka dib waxaa la soo saari doonaa war murtiyeed ku xusan go’aamada ka soo bixi doona shirka weli ka soconaya Magaalada Garowe,